Ahoana ny fomba hamohana ny Mac anao amin'ny macOS Sierra sy Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Auto Unlock dia iray amin'ireo zava-baovao nahasarika ny sain'ny mpampiasa ny Apple Watch sy Mac, satria mamela antsika hanokatra haingana ny Mac misy antsika tsy mila soraty ny tenimiafina maloto isaky ny mandrehitra na mifoha ny solosainantsika isika.
Maro amin'ireo fiasa vaovao atolotry ny orinasa antsika isan-taona ao amin'ny kinova vaovao an'ny rafitra fandefasana azy, tsy misy ho an'ny Mac rehetra izy ireo. Tsy hainay izao ny tena antony fa ao anatin'ny volana vitsivitsy dia azo antoka fa mikasika ny orona ny mpanao gazety sasany dia hamoaka izany avy ao amin'ny orinasa miorina amin'ny Cupertino ny antony tsy mifanaraka amin'ny Auto Unlock amin'ireo Mac rehetra eny an-tsena.
Ny iray amin'ireo fepetra takiana dia ny fananana Bluetooth 4.x, Bluetooth izay ananan'ireo solosaina tranainy kokoa saingy tsy takatry ny OS OS ilay izy, na tian'i Apple tsy hanaiky azy io, toy ny tranga tamin'ny MacBook Air 2011, satria nampiasa ny fampiharana an'ny antoko fahatelo aho dia afaka mamela ny Handoff sy Continuity izay tsy tokony handeha ny taonan'ny MacBook-ko. Fa andao apetraka amin'ny sisiny ireo volom-bolo ary tonga amin'izay tena zava-dehibe.
Raha mbola tsy hitanao ny fomba fiasan'ny Auto Unlock, dia avelanay ho anao ny horonantsary iray navoakan'ny mpiara-miasa amintsika, Luis Padilla, ao amin'ny iPad News, ary aiza Azontsika atao ny mahita fa rehefa manokatra ny efijery an'ny MacBook vaovao misy anao amin'ny Apple Watch eo am-pelatananao ianao dia mivoha ho azy tsy mila mampiditra ny teny miafina.
Fahazoan-dàlana hamaha Auto
Manaova Mac manomboka 2013 na taty aoriana izay mihodina macOS Sierra na manaraka.
Apple Watch miaraka amin'ny watchOS 3 os avy eo.
iPhone miaraka amin'ny iOS 10 na taty aoriana.
Na ny Mac, iPhone ary ny Apple Watch dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny kaonty iCloud iray ihany.
Ny Apple ID dia tsy maintsy mampiasa fanamarinana roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hamohana ny Mac anao amin'ny macOS Sierra sy Apple Watch
Ny tsy azoko dia ny filàna ny manana iPhone amin'ny iOS 10, raha tsy hiasa amin'ny iPhone fotsiny io fiasa io amin'ny Apple Watch
Satria mba hametrahana watchOS 3 ary hanararaotra an'io fiasa io dia azonao atao ihany izany raha manana iOS 10 amin'ny iPhone-nao ianao.
Ny fametrahana rindrambaiko Apple Watch dia vita amin'ny alàlan'ny iPhone.
Azo inoana fa raha mametraka watchOS 3 isika ary mampihena ny iPhone amin'ny iOS 9 dia tsy hifandray amin'ny Apple Watch izany. Apple indraindray manao zavatra hafahafa be.
Azonao atao ve ny mamoha fiara tsy misy Apple Watch? Amin'ny iPhone miaraka amin'ny iOS 10 ihany?
Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka atao afa-tsy amin'ny Apple Watch.
Carlo Napolitano dia hoy izy:
Manohana an'io fiasa io ve ny macbook pro tapaky ny taona 2012?
Valiny tamin'i Carlo Napolitano
Tamin'ny voalohany dia avy amin'ny maodely 2013 izy io, fa raha manana Bluetooth 4.0 izy io dia mety hiasa, fa mandra-pivoakan'ny kinova farany dia tsy ho fantatray.
Romǝø Tuǝsday dia hoy izy:
Manana ny zava-drehetra nohavaozina sy navadika aho nefa tsy azoko ny safidy amin'ny macbook hamaha amin'ny famantaranandro
Mamaly an'i Romǝø Tuǝsday
Eny, tsy tokony hanana olana ianao satria miasa tsara amin'ny betas. Ny Mac-nao ve dia manomboka amin'ny 2013 na avo kokoa?
MacBook Pro Mid 2012 izy, manana blu 4.x, niantso apple aho ary nilaza tamiko izy ireo fa tsy tokony hisy olana, na izany aza tsy manana safidy aho
Arturo lopez dia hoy izy:
Azoko atao ny mampihetsika ny fiasa ary tsy sarotra izany. Ny resaka fanarahana ny mpamosavy ary ny fiasa dia tena tsara sy mahasoa.
Valiny tamin'i Arturo Lopez
Gerson Solis dia hoy izy:
Tsara! Manana macbook air 2013 aho ary nohavaozina ho an'ny watchOS 3 ny paoma famantaranandro ary na dia ny iPhone miaraka amin'ny iOS 10 aza tsy mampifandray ahy, hita ao amin'ny safidin'ny safidin'ny rafitra ary mivoaka miaraka amin'ny fizahana ny zava-drehetra fa rehefa manidy sy manokatra aho ny macbook manontany tenimiafina.
Valiny tamin'i Gerson Solis
tahaky ny angon-drakitra fanampiny dia tsy nety tamiko izany raha tsy naveriko ny fiarahaban'ny fitaovana roa
Salama maraina, namboariko fotsiny fa ny iray amin'ireo toe-javatra tokony hataonao, aorian'ny fampandehanana ny singa roa sosona, dia ny mankany amin'ny SETTINGS-> FAHAMARINANA SY FIVORIANA-> Avelao ny Apple Watch hamaha ny MAC
Valiny tamin'i José María
Ry malala, nohavaoziko ny solosainako rehetra, ny macbook ho an'ny MacOS Sierra kinova 10.12, ny iPhone ho OS 10.0.2 ary ny paoma apetrako ho an'ny kinova 3.0, ny macbook sy ny iPhone dia misy fiarovana roa sosona, miditra amina sehatra> filaminana sy fiainana manokana aho ary tsy azoko atao ny manokatra ny mac amin'ny famantaranandro paoma, nanandrana namerina ny famantaranandro paoma aho ary mbola tsy hita izany.
ao amin'ny menio fikirana mac ao amin'ny motera fikarohana dia miafina aho raha tsy ampifandraisina ny famantaranandro.
ahoana no hamahako izany? Misaotra amin'ny fanampiana.
Salama, manana Mac 2012 aho fa tsy miseho amin'ny safidin'ny rafitra io safidy io .... ahoana no ahafahana mampandeha azy?
Ny mac no nanome ahy ny safidy ary nanjavona izany. Inona araka ny hevitrao no tokony hatao?
Manana Macbook 2016, iPhone 7 plus ary paoma (sierra, iOS 10 ary mijery os 3)
Izaho koa dia manana alalana fanamarinana roa sosona.
Talohan'ny nananako ny safidy hanokatra amin'ny paoma ampiasako dia tsy nampandeha azy mihitsy aho. Androany dia te hampihetsika azy aho ary tsy misy intsony ny safidy
Pedro Gonzalez dia hoy izy:
Salama, manana iMac afovoany 2011 aho, afaka mametraka zavatra ao amin'ny Bluetooth amin'ny Mac ve aho hahafahana mamoha azy amin'ny famantaranandron'ny paoma? misaotra
Valiny tamin'i Pedro González